Xuska 29-ka September ee ka hortagga khasaaraha ama dayaca ku yimaada cuntada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Xuska 29-ka September ee ka hortagga khasaaraha ama dayaca ku yimaada cuntada.
Xuska 29-ka September ee ka hortagga khasaaraha ama dayaca ku yimaada cuntada.
Qaar ka mid ah hey’adha Qaramada Midoobay iyo Dalalka Dunida ayaa manta u dabbaaldegay xuska 29-ka Setembar ee maalinta Caalamiga ah ee ka hortaggga lumidda ama khasaaraha ku yimaada cuntada aan la isticmaalin ee isu bedesha qashinka.
Sababaha ugu waawayn ee lumiya cuntada ee Afrika waa la’aanta qalab qaboojiya miraha dalagyada iyo kuwa loo isticmaalo qallajinta iyo xirfadaha wax-soo-saarka beeraha oo aan ku filnayn bulshooyinka beeralayda yaryar.
Hey’adda FAO waxay fududeysaa xuska maalinta adduunka ee wacyigelinta khasaaraha iyo wasakhda cuntada, iyadoo la kaashaneysa Barnaamijka Deegaanka ee UN (UNEP),WFP iyo kuwo kale,waxaana sanad kasta dalalka ka gooseeya Sab Saxaraga ku luma 4-bilyan oo doolar oo ah cuntada khasaarta.
Xuskaan aawadeed,waxaa baaq loo diray madaxda dalalka Afrika si ay u xoojiyaan dadaalladooda, una dhiirrigeliyaan maalgashiyada shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo yareeyo khasaaraha cuntada iyo qashinka.
Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sanadka 2019 soo saaray bayaan loogu magac daray Maalinta Caalamiga ah ee Ogaanshaha Cunnada khasaarta ee aysan isticmaalin dadka iyo warshadaha.
Previous articleSafiirka Soomaaliya ee Sudan iyo dhiggiisa Norway oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal.
Next articleHoggaamiyaha Mucaaradka Tanzania oo eedeyn ku shubasho u jeediyay Madaxweyne John Magufuli.